IVodafone TV iza kwi-Samsung Smart TV, uyifaka njani | Iindaba zeGajethi
IVodafone TV yeyokugqibela yokujoyina ikhathalogu yesicelo seTizen OS, inkqubo yokusebenza yeeSmart Smart TV. Ngoku uya kuba nakho ukuyifaka kwaye uyonwabele ngokulula yonke imixholo umboneleli wakho wee-audiovisual anayo ngaphandle kokusebenzisa izixhobo ezongeziweyo. Yiyo loo nto i-Tizen OS iqhubeka nokuzibeka njengenye yeendlela ezilungileyo zabasebenzisi enkosi kwivenkile yesicelo esondliweyo kunye nokusebenza kwayo.
Inkampani yaseMzantsi Korea namhlanje ibhengeze ukuba abasebenzisi bee-TV zayo ze-Smart baya kuba nakho ukufaka usetyenziso lweVodafone TV, Into efunwa ngabasebenzisi abaninzi kuthathelwa ingqalelo ukuba ukhuphiswano olufana neMovistar + lukhona ixesha elide. Ngale ndlela, i-Samsung igqibezela ukunikezela kwayo kwaye sele inazo zonke izicelo zabanikezeli beTV abaphezulu abahola eSpeyin ukuze abasebenzisi bayo bonwabe ngqo kumabonwakude ngaphandle kwesidingo sehardware eyongezelelweyo okanye iipheripherali ezigqibela ngokucaphukisa ngokwaneleyo ngaphezulu ukusuka Itafile yeTV.
Ukongeza kwi-TV ebukhoma, abasebenzisi abane IiTV zeSmart Smart TV ezingabathengi beVodafone TV ziya kuba nakho ukufikelela kumaxesha apheleleyo kuthotho abaluthandayo, amawaka eefilimu zazo zonke iintlobo kunye nekhathalogu ebanzi yomxholo wokufunwayo onje ngeemovie, uthotho, amaxwebhu, ezemidlalo okanye umculo.
Uyifaka njani iVodafone TV kwi-Samsung yam
Khumbula okokuqala ukuba iVodafone TV iya kufumaneka kuyo nayiphi na i-Samsung TV eneTizen OS kwinguqulelo yayo yangoku, Oko kukuthi, iya kuhambelana I-Samsung Smart TV yenziwe ngonyaka ka-2017.
Ngenisa iVenkile yeTizen OS Smart Hub esuka kwiTV yakho
Khuphela iapp yeVodafone TV
Ngena kwiakhawunti yakho yeVodafone yam
Kuyimfuneko ebalulekileyo ukuba ubukhe wavula ngaphambili umsebenzi Izixhobo ezininzi ngaphakathi kwisango lam leVodafone. Kulula kakhulu ukuba ube neVodafone TV kwi-Samsung TV yakho ngaphandle kwesidingo sezixhobo zangaphandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » IVodafone TV iza kwi-Samsung Smart TV, uyifaka njani
Ukwazi njani ukuba ndibhlokiwe kuFacebook